ए भाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री भईदेउन होऔ : प्रधानमन्त्री - NepalTimes
ए भाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री भईदेउन होऔ : प्रधानमन्त्री
३० चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वामपन्थी विरोधीहरुलाई सफल हुन नदिने बताएका छन् ।
नेपाल उत्पीडित जातिय मुक्ति समाजको राष्ट्रिय भेलालाई सोमबार काठमाण्डौमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र र कम्युनिष्ट आन्दोलनका नाममा नक्कली कुरा गर्नेहरु सलबलाई रहेको बताए । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तर्फ इंगित गर्दे उनले विगतमा विभिन्न किसिमका सपना बाँडेर युवाहरुलाई युद्धमा लगाउनेहरु नै अहिले लोकतन्त्र र अग्रगामी कदम विरुद्ध लागेको दाबी गरे । झण्डै दुई तिहाईको पार्टी फुटाएर वर्तमान सरकार ठाल्नका लागि अरुसँग विन्ति गर्दै हिडेको भनी उनले दाहालप्रति व्यंग्य गरे ।
उनले भने “एकेडेमीको डबलीमा जो भेट्यो त्यही । ए भाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री भईदेउन होऔ । शेर बहादुर जीलाई भेट्यो । दाई प्रधानमन्त्री भईदिनुपर्यो । महन्थ जीलाई भेट्यो ए दाई प्रधानमन्त्री भईदिनु पर्यो । किन भन्दा कम्युनिष्ट सरकार ठाल्नु पर्यो क्या त्यसकारण शेरबहादुर भईदिनुपर्यो । यो देशलाई अगाडि बढाउन शेर बहादुर जी प्रधानमन्त्री बन्दिनुपर्यो । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बचाउनका लागि । कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकता बचाउन । यस्ता नक्कलि कुरा गर्ने तत्वहरु अहिले पनि छन् । सलबलाई रहेका छन् । यी चुनौतिहरु अहिले पनि छन् । तर तपाईहरु ढुक्क रहनुहोस् यस्ता छद्भेषी, वामपन्थी विरोधी, कम्युनिष्ट विरोधी, प्रगतीविरोधी, अग्रगामी आन्दोलन विरोधी ,राष्ट्रियता, लोकतन्त्र विरोधी तत्वहरुलाई सफलता साथ अगाडि जान दिईने छैन । यीनका गलत र अपराधिक उद्देश्यहरु सफल हुन सक्ने छैन । ”
आफुहरुले जिताईदिएकाले अहिलेको हैसियत प्राप्त भएको भन्दै उनले केही दिनमा त्यो हैसियत पनि खोस्ने चेतावनी दिए । उनले भने “सदस्यताबाट निस्कासन गरे धित पुर्याए हुन्छ । हामीले टाँसिदिएको जुँगा । अलिक दिनपछि त्यो जुँगा हामी निकाल्दिन्छौ त्यसपछि सक्कियो । ”
उनले नेकपा एमाले, कम्युनिष्ट, वामपन्थी र देश बनाउनेसँग नमिलेर दुई तिहाईको सरकार ढलाएर कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त पार्न उद्त रहेको दाबी गरे । माओवादी अध्यक्ष दाहालतर्फ इंगित गर्दे लोकतन्त्रविरुद्ध क्रान्तिका सपना देखाएर युद्धमा लागेको र कयौलाई पीडा दिएकाहरु नै “मैले आफ्नालाई छोडेर अरुसंग मिलेछु” भनेर भन्ने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरे “झण्डै दुई तिहाईको पार्टी फुटाएर यो सरकार ढाल्नलाई कांग्रेस संग विन्ति पत्र लिएर जाँदा आफ्ना छोडियो कि छोडिएन ? अन्त गईयो कि गईएन ? ”